Yandisa amathuba okuba umxholo wakho ube yintsholongwane ngezi 5 Tactics | Martech Zone
Sabelane nabanye nge infographics kwi izinto zomxholo wentsholongwane kwaye ndihlala ndithandabuza ukutyhala legciwane njengeqhinga. Umxholo wentsholongwane ungazisa ulwazi ngebrand - siyayibona rhoqo iividiyo. Nangona kunjalo, andikaze ndibone mntu ubetha epakini ngalo lonke ixesha. Abanye bazama kanzima, abanye bayasilela… yindibaniselwano yetalente kunye nethamsanqa elikhuthaza umxholo wakho ukuba ube yintsholongwane.
Oko kwathethi, ndiyakholelwa ukuba amaqhinga asetyenzisiweyo xa kugxilwe kuwo umxholo wentsholongwane zizicwangciso ezilungileyo zomxholo ngokubanzi. Kule infographic evela ku-WhoIsHostingThis?, Bachaza Izizathu ezi-5 zokuba umxholo wakho omangalisayo awuyi kuhamba ngentsholongwane:
Ukungabikho komtsalane ngokweemvakalelo -Abantu babelana ngomxholo ovelisa ukwazi, ukumangaliswa, umdla, ukothuka, ukungaqiniseki, ukuncoma kunye nokuhlekisa.
“Ababelananga” -Abantu bafuna ukwabelana ngayo, kulula ukuyaba, ibonelela ngexabiso, kwaye iya kutsalela ingqalelo kwabo babelana ngayo.
Ixesha elibi -Fumana amaxesha omhla, iveki, ixesha okanye umcimbi ukuba umxholo ufunwa kwaye uyathandwa.
Uyilo olubi -Ubume, imibala kunye nomtsalane obonakalayo kwimicimbi xa kufikwa kumxholo onokwabelana. Utyalo-mali kuyilo lutyalo-mali kumathuba okuba kwabelwane ngalo.
Ukusasazwa kakubi -Oku mhlawumbi le yeyona sibona incinci isetyenzisiwe… isasaza kwaye inyuse umxholo wakho kwiziza zonke apho izakufikelela kubaphulaphuli abaninzi.
tags: mxatyiswaukumangalaukumangaliswaumxholo omangalisayoqhinga lomxholoukwazimvakaleloukubhena ngokweemvakaleloezihlekisayoumdlaAmanani entengisoukungaqinisekilegciwaneumxholo wentsholongwaneividiyo yentsholongwane